Soo dejisan Uninstall Tool 3.5.10 – Vessoft
WindowsNidaamkaMaaraynta faylkaUninstall Tool
Bogga rasmiga ah: Uninstall Tool
Uninstall Tool – waa uninstaller awood leh oo loogu talagalay inay si buuxda uga saaraan barnaamijka macluumaadka haraaga. Software wuxuu u shaqeeyaa si ka dhakhso badan Windows standard uninstaller iyo ka saari kartaa codsiyada qarsoon iyo nidaamka. Uninstall Tool waxay taageertaa saaxiiste uninstall taasoo si qasab ah u joojin karta geeddi socodka socodka ee looga hortago in si sax ah looga saaro software, ama jadwalka software uninstall daahfurnaanta ilaa kombiyuutarka xiga dib u bilaabi haddii faylka ama faylka codsigan loo isticmaalo nidaamka oo aan la tirtiri karin. Uninstall Tool kuu ogolaanayaa inaad si deg deg ah u tagto entries diiwaanka, folder qalab iyo website-ka, iyo module-ka raadinta smart u suurta geliya si degdeg ah u hesho codsiga la doonayo ee liiska. Maamulaha la dhisay ee autorun wuxuu muujiyaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan barnaamijka si toos ah loo bilaabay iyadoo Windows ay bilawdo oo kuu ogolaato inaad ka saarto waxyaabaha aan loo baahneyn ama ku darsanno codsiyo cusub marka loo eego nooca furitaanka hore. Uninstall Tool wuxuu taageersan yahay habka loo ilaaliyo dhammaan isbeddelada loo sameeyey nidaamka marka lagu rakibayo software cusub, taas oo aad ku ogaan karto dhamaan diiwaangelinta diiwaanka, faylasha lagu rakibay faylasha iyo macluumaad kale oo la xiriira barnaamijkan.
Kala saarida nidaamka iyo software qarsoodi ah
Ka saarida qasabka iyo kala-qaybinta
Xiritaan qasab ah ee geedi socodka socodka
Ku-beddelida qorista diiwaanka barnaamijka
Soo dejisan Uninstall Tool
Faallo ku saabsan Uninstall Tool
Uninstall Tool Xirfadaha la xiriira